Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Inona no vaovao any Dubai
Dubai dia manohy manaitra ireo mpitsidika manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny hotely vaovao, traikefa ara-kolotsaina ary safidy mahandro. Ny QE2 dia nanao ny diany farany nankany Port Rashid ary novaina ho hotely sy traikefa vakoka. Misokatra amin'ny famoahana malefaka izy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fisokafana lehibe, fandraisana ireo vahiny manomboka ny volana oktobra 2018. Heston Blumenthal dia nijery ny any Dubai ihany koa ary hanokatra trano fisakafoanana amin'ny taona 2019.
Jereo ny vaovao farany momba ny fizahantany any Dubai etsy ambany:
Hisokatra W Hotel faharoa amin'ny volana Jona 2018, miorina eo amoron'ny morontsiraka andrefana an'ny The Palm. Namboarina hitovy amin'ny litera W, ny trano fandraisam-bahiny kilasy manerantany sy ny toeram-ponenana dia ahitana spa, faritra pisinina, fisehon'ny rano ary kojakoja hafa, ary koa trano honenana manodidina ny 100,000 metatra toradroa ao anatin'izany ny efitrano fandraisam-bahiny 350 sy duplex super super lafo vidy, triplex. trano sy penthouse. Ny trano fisakafoanana, fivarotana antsinjarany ary fotodrafitrasa ho an'ny besinimaro dia hita eo amin'ny tany ambany elatry ny hotely, miaraka amin'ny bara fitodiana sy trano fisakafoanana amin'ny ambaratonga avo hanararaotana tanteraka ny fomba fijery roa. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady www.wdubaithepalm.com
Al Bandar Rotana sy Al Bandar Arjaan nataon'i Rotana ao amin'ny Dubai Creek
Rotana dia nanambara ny fisokafan'ny trano fandraisam-bahiny roa any Dubai, ny Al Bandar Rotana misy kintana dimy, ary trano misy servisy feno fanaka feno, Al Bandar Arjaan by Rotana, ao Dubai Creek.
Namboarina tamin'ny karazana rendrarendra maoderina ary miorina eo amin'ny toerana amoron-drano lehibe amin'ny làlan'i Baniyas Road, ireo fananana vaovao dia manome fomba fijery mivelatra momba ny Creek. Miaraka amin'ny fanakaikezan'izy ireo ny lova lehibe sy ny fizahantany mpizahatany, ao anatin'izany ny Dubai Festival City, Museum Museum, Gold Souk ary Al Seef, ny hotely dia manapa-kevitra voajanahary ho an'ireo mpitsidika mizaha tanàna ary koa toerana mety indrindra ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra mitady fahafaha-manao sy kintana dimy toerana any afovoan'i Dubai. Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy famandrihana dia tsidiho ny www.rotana.com
Rove Hotels dia nanokatra ny trano fandraisam-bahiny fahadimy ao Dubai Marina, izay mora azo ny toerana fivarotana sy fialamboly mahaliana toa an'i The Beach. Rove Hotels dia manome mpitsidika hotely mora vidy amin'ny toerana mahafinaritra manodidina ny tanàna. Ny mpitsidika ao amin'ny Rove Dubai Marina dia hanana ny fahitany ny sary an-tsaina an'i Palm Jumeirah sy The Walk JBR. Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy hamandrihana dia tsidiho ny www.rovehotels.com
Ny Dorchester Collection dia mametraka ny masony any Dubai
Ny marika hotely lafo vidy Dorchester Collection dia nijery an'i Dubai miaraka amin'ny hotely kintana dimy ankehitriny. Ity no Dorchester voalohany any Moyen Orient. Eo an-dàlam-panamboarana izao no an-dàlam-by eo amoron'ny Lakandranon'i Dubai ao Downtown Dubai. Vaovao bebe kokoa ho avy rehefa nambara.
ROOTES FLIGHT Vaovao
Ny fidirana mankany Dubai dia nanjary ho mora kokoa ho an'ireo mpitsidika avy any Ekosy sy atsimo atsinanan'i Angletera, miaraka amin'ny fanombohana zotra sidina roa vaovao. Emirates dia nanambara ny fanombohana serivisy isan'andro avy any London Stansted manomboka amin'ny 8 Jona ary serivisy isan'andro avy any Edinburgh manomboka amin'ny 1 Oktobra.
Misokatra ho toy ny hotely sy tranombakoka ao Dubai ny mpanafika an-dranomasina malaza Queen Elizabeth II
Rehefa afaka folo taona teo amin'ny seranan-tsambo tao Port Rashid, ilay mpandahatra ny ranomasina malaza Queen Elizabeth II dia ao anatin'ny dingana fandefasana malefaka miaraka amin'ny fanokafana lehibe nomanina ho an'ny volana oktobra 2018. Ary koa ny fanolorana vahiny ho an'ny hotely hitoerana tsy manam-paharoa sy manja, ny tranombakoka no hanolotra ny rehetra mpitsidika ny tanàna ny fahitana mahaliana amin'ity sambo mpiaro ny ranomasina sy sambo fitsangantsanganana malaza ity. Ny toerana misy an'i Port Rashid ao amin'ny hotely dia hahatonga azy io ho toerana mety indrindra hijerena ny distrika 'Old Dubai' mahavariana, ary koa ireo zava-mahaliana rehetra hitan'ny mpitsidika ao Downtown Dubai.
Traikefa amin'ny CULINARY
Dubai dia nandefa ny trano fisakafoanana MasterChef fahita fahitalavitra voalohany eran-tany
Ireo mpankafy MasterChef mitsidika an'i Dubai amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity dia afaka manantena ny hanana traikefa fisakafoanana voalohany eran-tany amin'ny fananganana trano fisakafoanana vaovao miorina amin'ny andiam-pahitalavitra malaza be. Ny trano fisakafoanana ao amin'ny Wyndham West Bay Dubai Marina Hotel dia hampiseho ny talenta sy ny fomba fahandro an'ireo mpifaninana MasterChef avy amin'ireo firenena 52 namokarana ilay programa. Io no endrika fahitalavitra mahandro fahombiazana be indrindra eran'izao tontolo izao ary alefa amin'ny fahitalavitra any amin'ny firenena 200 mahery.
Aqua Pod: Dingana fisakafoanana maharitra maharitra voalohany manerantany eto Dubai
Aqua Pod: Ny drive-through maharitra maharitra voalohany dia nosokafana tany Dubai ankehitriny izay manolotra traikefa fisakafoanana aqua vaovao mahafinaritra. Any amin'ny iray amin'ireo farihin'i Dubai, ilay trano fisakafoanana mitsingevana dia mamela ny mpanjifa amin'ny sambo kely kokoa hanatona sy hametraka baiko ara-tsakafo. Raha tsy izany, ny mpanjifa amin'ny sambo lehibe kokoa misy lavitra dia afaka mankafy serivisy mpandroso sakafo amin'ny alàlan'ny jet ski. Ny Aqua Pod dia mirehareha amin'ny endrika maritrano revolisionera miaraka amin'ny fahitana maharitra maharitra amin'ny alàlan'ny herinaratra sy ny gazoala, mifanaraka amin'ny fifantohan'ny governemanta Dubai amin'ny hetsika maitso. Ny mpanjifa dia afaka mankafy ny fisakafoanana an-tsokosoko izay natao hifaninana amin'ny fampifangaroana sakafo haingana indrindra ao an-tanàna.
Misokatra ao amin'ny Bvlgari Resort ny hotely fisakafoanana japoney sivy miavaka
Ny trano fisakafoanana kely indrindra sy tokana indrindra any Dubai, Hōseki dia nisokatra tao amin'ny Bvlgari Resort. Amin'ny seza sivy fotsiny, io no fanokafana andrasana indrindra amin'ny taona, hatreto. Hōseki amin'ny teny japoney dia midika vatosoa ary hanome ny mpihinana traikefa mahandro tsy hay hadinoina. Ny akora rehetra dia aondrana mivantana avy any Japon avy amin'i Chef Masahiro Sugiyama. Ilay chef an'ny fahenina dia nitondra lovantsofina sushi nandritra ny 157 taona teo an-databatra ary afaka manantena sakafo miavaka sy noforonina tanteraka ny vahiny. Misokatra ny talata ka hatramin'ny sabotsy i Hōseki hisakafo antoandro sy hisakafo hariva ary mila famandrihana.
Sakafo fisakafoanana nataon'i Heston Blumenthal hisokatra amin'ny taona 2019
Chef kintana Michelin kintana sy traikefa, Heston Blumenthal ary chef mpanatanteraka, Ashley Palmer-Watts dia vonona hanokatra ny fizarana fahatelo amin'ny trano fisakafoanana nahazo loka, Dinner ao amin'ny The Royal Atlantis Resort and Residences amin'ny taona 2019. Ny menio dia manolotra lovia ankehitriny izay aingam-panahy amin'ny fomba fahandro manan-tantara. Ny lovia malaza Heston's fruit 'Meat Fruit', atin'ny akoho ary foie gras parfait miafina ho mandarin dia mety hiseho eo amin'ny menio. Ny trano fisakafoanana koa dia hanisy fisakafoanana manokana, terraces roa ivelan'ny trano ary fisotroana voatokana.
Desert Palm dia namoaka an'i Samāna Spa vaovao
Ny Desert Palm Hotel & Resort dia nanangana traikefa spa mahaliana vaovao tamin'ny fanokafana ny Samāna Spa. Ny spa dia manana ny hany endrika Aromatherapy Bar an'i Tisserand any Dubai. Ny dia spaoro tsirairay dia manomboka amin'ny consultation homeopathic miaraka amin'ny Experience Guide sy Guru hamaritana ny filan'ny tsirairay ny vahiny sy ny menaka ilaina ilaina indrindra amin'ny fitsaboana azy ireo.
Ny spa dia maka ny anarany avy amin'ny teny Sanskrit, Samāna, izay midika hoe mampitony na mampitony. Ny fampifangaroana ny fomba fanao amin'ny aromatherapy taloha amin'ny fanao spa farany, ny vahiny Samāna Spa dia milentika amin'ny dia natao hanentanana ny saina sy hamelombelona ny saina sy ny vatana ary ny fanahy. Ny vidin'ny fitsaboana dia manomboka amin'ny £ 65 ho an'ny fitsaboana 45 minitra.
TOETRA SY FIAINANA
Yoga anaty rano ao Atlantis the Palm
Ny vahiny sy ny mpitsidika an'i Atlantis the Palm dia afaka miaina yoga amin'ny fomba vaovao ao amin'ny Lost Chambers Aquarium. Miorina anaty farihy anaty rano tsy manam-paharoa ao amin'ny aquarium, yogis dia afaka mamelombelona sy mamerina ny tenany mandritra ny The Lost Chambers Aquarium Hatha Yoga Class. Misokatra ho an'ny yogis amin'ny ambaratonga rehetra ny kilasy ary mikendry ny hanatsara ny tanjaka sy ny fahaleovan-tena ary ny fandanjana. Hita amin'ny talata sy zoma manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 9 maraina.